Itel Mobile 10 taona – Akanin-jaza Lovasoa : nankalazaina niaraka ny fetin’ny Noely | NewsMada
Itel Mobile 10 taona – Akanin-jaza Lovasoa : nankalazaina niaraka ny fetin’ny Noely
Mitohy ny hetsika fanaovana asa soa tanterahin’ny orinasa mpamokatra finday Itel, eto Madagasikara. Taorian’ny fanolorana fanomezana ireo ankizy beazina mahatratra 100 sy ireo mpampianatra 32 teny amin’ny ONG Manda Tsiadana, ny 24 novambra teo…
Niara-nankalaza ny fetin’ny Noely tamin’ireo ankizikely tezaina ao amin’ny Akanin-jaza Lovasoa, etsy 67Ha ny ekipan’ny Itel Mobile, omaly maraina. Nitondra hazonoely roa miaraka amin’ny haingony izy ireo. Miampy ireo fanomezana ho an’ireo ankizy madinika mahatratra 60 miaraka amin’ireo mpanabe ao an-toerana. Niara-nifaly avokoa ny rehetra. Amin’ny ankapobeny, mitaiza ireo ankizy sahirana amin’iny faritra 67 ha iny sy ny manodidina ny Akanin-jaza Lovasoa izay niorina tany amin’ny taona 1979.
Nomarihin’ny sekretera jeneralin’ny Akanin-jaza, Rtoa Ratsiraka Annick, rahateo fa « 70 ny Akanin-jaza manerana ny Nosy ka ny 25 amin’ireo, eto Antananarivo. Mitady mpanohana mihitsy ireny akany ireny ka mahavelombolo anay ny fisian’ny mpandraharaha manampy tahaka izao ataon’ny Itel Mobile izao ». Nisaotra ity orinasa ity ihany koa izy nahatsiaro ireo zaza beazin’ny Akanin-jaza Lovasoa, izay nomarihiny fa saika avy any amin’ny fianakaviana sahirana ny ankamaroany.
Marihina fa famokarana finday no ifotoran’ny asan’ity orinasa Itel Mobile ity. Tsy vao sambany no nanao asa soa tahaka izao izy ireo fa efa fanaony any amin’ireo firenena manaparitaka Itel, aty Afrika, ny manampy ny sahirana. Fantatra rahateo fa tsy hijanona eto ny fanaovana hetsika toa ity natao omaly ity fa hitohy hatrany hatrany.